जाडोयाममा कोरोनाको दोस्रो लहर आउने विज्ञको चेतावनी – Rajya TV
By राज्य टिभि	 Last updated Nov 28, 2020
काठमाडौँ,१३ मंसिर ।
चिसोयाममा कोरोनाको दोस्रो लहर आउन सक्ने विज्ञहरूले स्वास्थ्य सूरक्षा अपनाउन सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहर नसकिँदै दोस्रो लहरमा संक्रमण बढ्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।
चिसोमा आरएनए भाइरस वृद्घि हुन सक्ने भएकाले नियमित रूपमा सही तरिकाले मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी र हातको सरसफाइमा ध्यान दिन उनीहरूको सुझाव छ ।
‘नेपाल र उत्तरी भारतमा दोस्रो लहर जाडोयाममा आउन सक्ने उच्च सम्भावना छ । युरोपमा आगामी वर्ष तेस्रो लहर आउने जोखिम औंल्याइँदै छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डा. वासुदेव पाण्डेले भन्नुभयो, ‘अहिले मुलुकमा देखिएको पहिलो लहर घटेर तल पुगेको छैन तर डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म दोस्रो लहर आउने सम्भावना उच्च छ ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले यसै साता चेतावनी जारी गर्दै दक्षिण र पश्चिम एसियाली मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो तरंग आउने भएकाले सावधान रहन सचेत गराएको छ ।
डब्लूएचओका पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र निर्देशक अहमद अल मन्धारीले दक्षिण पश्चिम एसियाली मुलुकलाई दोस्रो लहरको सामना गर्न तयार रहन भन्नुभएको छ ।
रोकथामको उचित उपाय नअपनाउँदा कोरोना संक्रमण डरलाग्दो गरी तीव्र रूपमा फैलिने भन्दै विज्ञहरुले संक्रमणको संख्या एक सातामै आठ गुणासम्म बढ्न सक्ने आकलन गरेका छन् । आगामी सात दिनमा संक्रमण ४० गुणाको दरले फैलिन सक्ने, तेस्रो साता तीन सय र चौथो साता हजार गुणाले फैलिने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् ।
‘जाडोयाममा संक्रमणको थप जोखिम भएकाले यसबाट बच्न अतिरिक्त स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुको विकल्प छैन,’ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रमुख कन्सलटेन्ट डा. अनुप बाँस्तोलाले भन्नुभयो, ‘कोभिडविरुद्घको खोप आउन समय लाग्ने भएकाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर जोखिम समूहमा रहेकालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ ।
कोरोनाविरुद्धको खोप नआउन्जेल जाडोयाममा मौसमी रुघाखोकी, निमोनिया आदिको खोप लगाउनु फाइदाजनक हुन सक्ने पनि विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
नेपालमा हालसम्म २ लाख २९ हजार ३४३ जना संक्रमित भएका छन् भने १ हजार ४ सय ३५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।